PressReader - Isolezwe: 2018-04-13 - Bagule kanye kanye onesi kushoda abasebenzi
Bagule kanye kanye onesi kushoda abasebenzi
Isolezwe - 2018-04-13 - IZINDABA - LUNGI LANGA
KUSOLWA ukuthi ukushoda kwabasebenzi bezempilo esibhedlela iKing Dinuzulu yikona okubangele ukugula kanye kanye kwabahlengikazi bophiko lokubelethisa.
Kuthiwa abasebenzi bophiko olubhekele ezokubelethisa babike ukuthi bayagula ngesikhathi esisodwa emuva kwezikhalo zokushoda kwabasebenzi nokunqanyulwa kokusebenza isikhathi esengeziwe.
Umsebenzi ongagunyaziwe ukukhuluma nabezindaba uthe kusuka ngoLwesihlanu olwedlule abasebenzi bakulolu phiko olunamawodi amathathu babike ukugula kanye kanye bangeza emsebenzini baze babuya ngoLwesibili
Uthe ethimbeni elisebenza ebusuku kufike umphathi wewodi nomhlengikazi oyedwa iwodi ngayinye. Nasethimbeni elisebenza ekuseni kwenzeka into efanayo.
Uthe ngokujwayelekile kusebenza abahlengikazi abayisikhombisa iwodi ngayinye ekuseni nantambama.
Iwodi ngayinye bahlanu abasebenzi ababike ukuthi abaphilanga bangeza emsebenzini kusuka ngoLwesihlanu.
“Abasebenzi bake bakhala ngokuthi bayashoda nokuthi kugcina kwenzeka amaphutha abeka iziguli engcupheni. Bebekhala ngokuthi kuke kube nezikhathi la beba bathathu ewodini benakekela iziguli eziwu-31,” kusho umsebenzi.
Kuthiwa abasebenzi bakhale ngokuthi umphathi uvale uhlelo lokulethwa kwabanye abasebenzi uma kukhona abangekho.
Umthombo osondelene nalolu daba uthe uma abasebenzi benganele bekulandwa omunye umsebenzi ukuze azovala isikhala bese enikwa isibonelelo sokusebenza amahora angeziwe. Lokhu kushintshiwe, abasebenzi batshelwa ukuthi abaqhubeke basebenze noma beshoda.
Okhulumela uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natali, uNksz Ncumisa Mafunda, uthe umnyango utshelwe ngabaphathi besibhedlela ukuthi bayazi ngezikhalo ezithile ezibekwe abahlengikazi futhi kukhona abakwenzayo ukulungisa isimo.